लकडाउनकाे असर सौराहाको हात्ती सफारीमा पनि: व्यवसायी भन्छन्–आम्दानी छैन्, पाल्न गाह्रो भो ! – kalikadainik.com
लकडाउनकाे असर सौराहाको हात्ती सफारीमा पनि: व्यवसायी भन्छन्–आम्दानी छैन्, पाल्न गाह्रो भो !
बुधबार, आषाढ ०३, २०७७ | १५:३९:२५ |
चितवन । चितवनको पर्यटन विकासको एक हिस्सा हात्ती सफारी पनि हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनपछि हात्ती सफारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । सफारी नहुँदा हात्ती बेकामे भएका छन् । उनीहरको पालनपोषणमा लकडाउनको प्रत्यक्ष असर परेको छ । उनीहरुका लागि आहारमा समस्या परेको भन्दै व्यवसायीहरुले चरिचरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
राप्ती पारि दुई महिना हात्ती चराउने व्यवस्था भएपनि जेष्ठ १२ गतेदेखि निकुञ्जले प्रवेश रोक लगाएको छ । हात्ती पाल्न नसक्ने अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराईसकेपनि आफ्ना समस्या सम्बोधनमा कुनै पहल नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
युनाईटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि हात्ती चरिचरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । सो सहकारीमा सौराहाका व्यवसायीहरुको ७० वटा हात्ती आबद्ध छन् ।
‘हात्ती विना सौराहा कल्पना गर्न सकिँदैन । यसका लागि पर्याप्त आहार नहुँदा हात्ती पाल्न गाह्रो भएको छ’, सकारीका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारीले भने । तिवारीका अनुसार घाँसका अलवा अन्य आहारको समेत अभाव भएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको निजी जग्गा छ, त्यहाँ प्रशस्त घाँस छन् तर हात्ती भने भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार त्यहाँ ३७ विगाहा निजी जग्गा छ । हात्तीका लागि घाँस पराल बाहेक दैनिक २०० लिटर पानी, २० किलो धान, २५० ग्राम ढिके नुन, १ किलो चना आवश्यक पर्छ । आहार र माउतेका तलबसहित गरि एउटा हात्तीको मासिक खर्च ८० हजारदेखि १ लाखसम्म हुने अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दिपक भट्टराईले कोरानाका कारण यहाँको पर्यटन थिलोथिलो भएको अवस्थामा निजी हात्तीहरु पाल्न कठिनाई भईरहेको बताए । भट्टराईले हात्ती संचालन सहकारी संस्थाको माग प्रति आफ्नो संस्थाको एक्येवद्धता रहेको बताए ।
‘पर्यटनको महत्वपूर्ण हिस्सामा हात्ती पर्छ, यो राष्ट्रको सम्पती हो । यसलाई जोगाउन राज्यले ठोस कदम चाल्नु पर्छ’, संघका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । लकडाउनअघि सफारीका क्रममा हात्ती वन क्षेत्रमा चर्ने हुँदा त्यही पर्याप्त आहार पाउने भएपनि अहिले आम्दानी नभएको अवस्थामा खर्च मात्र भएको भट्टराईको भनाइ छ ।
यहाँका निजी हात्तीहरु बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन, चित्रसेन मध्यवर्ती सामुदायिक वन र कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा सफारी हुने गर्छन् । बाघमारा वनले मात्र वार्षिक २ करोड रुपैया हात्ती सफारी मार्फत कमाउँछ । हात्ती सञ्चालन वापत सहकारीले वार्षिक एक करोड रुपैया राजस्व समेत तिर्दै आएको छ ।
निकुञ्जमा घाँस खेर गईरहनु तर हात्तीले खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुने र लकडाउनको अवधि अझ लम्विदै गए निकुञ्जमा हात्ती लगेर छाड्नु पर्ने अवस्था सृजना हुने व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।